မြရွက်ဝေ: October 2007
ဈေးကြီးပြီး တခါတလေမှ တွေ့ရတဲ့ဝက်နံရိုးကို ဒီတခါတော့ ဈေးနဲနဲတော်တာနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီးဝယ်ခဲ့တယ်။
ယိုးဒယားဆိုင် မျှစ်ချဉ်ဘူးလည်းရှိတော့ အတော်ဘဲ။
ဂျပန်လိုတော့ 竹の子塩水漬け (take no ko shiomizuzuke) တဲ့။ အကွင်းလိုက်လှီးထားတဲ့ スライス(suraisu)ရယ် အချောင်းလိုက်လှီးထားတဲ့ 千切り(sengiri)ရယ် နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ဒီတခါချက်တာ スライスနဲ့။ သူ့ချည်းသက်သက်က သိပ်မနူးညံ့လို့ ထပ်ဝယ်ထားတဲ့ ရိုးရိုးမျှစ်တထုပ်နဲ့ ပေါင်းတည်လိုက်တယ်။ ခပ်ထုပ်ထုပ်နဲ့ ဝါးလို့ကောင်းလို့ えのき茸 (enokitake)ကို ဟင်းအိုးဆူလာတဲ့အချိန် ထပ်ထည့်လိုက်တယ်။ ရမ်းသမ်းcookချက်ကတော့ ပြောမဆုံးပေါင်ဘဲ။ ဒါတောင် ဟင်းအရောင်လှပြီး မွှေးအောင်လို့ Tom Yam Paste - トムヤムペースト ပါ ထည့်ထားသေးတယ်။
"အဲနိုကိမှို နဲ့ တုံယမ်းအနှစ်"
ဘယ်လိုလျှောက်ချက်ချက် အိမ်ကြီးရှင်ကတော့ K.O (kore oishii)ပေါ့။ အားပေးလိုက်တာ ပုံမှန် ညမနက်ချက်ထားတဲ့ ထမင်းအိုး မလောက်လို့ ထပ်တည်လိုက်ရတယ်။(°∨°)
Posted by မြရွက်ဝေ at 10:37 AM4comments
ကျွန်မ ဝါသနာကိုက ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်။ ဘယ်ဟာမှ အစအဆုံးမတတ်ဘူး။ ဂျပန်လို "三日坊主-mikka bouzu (၃ရက်ဘုန်းကြီး)" မြန်မာလိုတော့"ရေတက်ငါးဇင်ရိုင်း"လို တရေတက်အကျင့်ကောင်းလေး ရှိတယ်။ ဂျပန်စာသင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် အပြီးထိမသင်ခဲ့ဘူး။ မတတ်တတတ်နဲ့ သူများစာလာမေးရင် အတော်ချွေးပြန်ရတယ်။ စက်ချုပ်တတ်သည်။ ကျွမ်းကျင်လားဆိုတော့ ဟင်အင်း!! ၁၀တန်းဖြေပြီး အားလပ်နေတုန်း စက်ချုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်မအစ်မက သင်ပေးမယ်ဆိုတာကို အပျင်းကြီးနေခဲ့တာ။ အစ်မG.T.Iသွားတတ်ရတော့မယ်ဆိုမှ တပတ်ထဲနဲ့ကပ်ပြီး အလောသုံးဆယ် သင်တာလေ။ ကိုယ့်အင်္ကျီ၊ ဂါဝန်၊ စကတ်လောက်တော့ ချုပ်တတ်သွားတယ်။ အိမ်ကလည်း အတော်နားပူသက်သာသွားတာ။ ဆိုင်သွားအပ်ပြီး စိတ်တိုင်းမကျရင် တနေကုန် ပြောမဆုံးဘူးဆိုတော့။ သူငယ်ချင်းတွေက ချုပ်ပေးပါဆိုရင် မျက်ခုံးလှုပ်ရတယ်။ ဂျီးမပွ ပျက်သွားလည်း ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ ချုပ်ပေးပါတယ်။
ကျွန်မအစ်မက လက်မှုအတော်ရတယ်။ ကျွန်မက သူ့ဆီကပြန်သင်ယူတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ပြီးအောင်မသင်ဘူး။ ကော်ပြားနဲ့ ပိုက်ဆံအိပ်ထိုးနည်းသင်တုန်းကလည်း ဒီလိုဘဲ။ ၂လုံးတော့ပြီးသွားပြီး အဖြူတလုံးတော့ တို့လို့တန်းလန်းကျန်နေသေးတယ်။ တတ်တင်းဆိုလည်း သင်တိုင်းချည်သေသွားလို့ အခြေခံကွင်းကနေ မတတ်ဘူး။ တချောင်းထိုးကတော့ တတ်တင်းထက်စာရင် နဲနဲပိုရတယ်။ အင်တာနက် အလွယ်သုံးလို့ရတော့ အားရင် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေရှာလိုက် ဟင်းချက်နည်းလေးကြည့်လိုက် စိတ်ကူးပေါက်ရာလေးရှာလိုက် ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်နဲ့ပေါ့။ အခုတလော စိတ်ကူးပေါက်ပြီး တချောင်းထိုးပုံလေးတချို့ လိုက်စုထားတယ်။ တချောင်းထိုး ထိုးနည်းတော့ ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပုံတွေရှာတုန်းက အတော်ခေါင်းစားသွားသေးတယ်။ တချောင်းထိုးကို ဂျပန်လို ဘယ်လိုခေါ်မှန်းမသိလို့။ (အင်္ဂလိပ်လိုလည်း မသိဘူး။) သိတဲ့စာလုံး "編み物-amimono (အာမိမိုနို)"နဲ့ရှာတော့ နှစ်ချောင်းထိုးပုံတွေဘဲ တွေ့တာများတယ်။ "編み物-amimono"က နှစ်ချောင်းထိုး (သို့) ဇာထိုးပန်းထိုးဖြစ်မယ်။ နောက်ရှာရင်းနဲ့ တွေ့ပြီ။ တချောင်းထိုးကို " かぎ針編み- (ကဂိဘရိအာမိ) / 鉤針 / 鈎針-kagibari (ကဂိဘရိ)" တဲ့။ ခန်းဂျီးက ၂မျိုးဖြစ်နေတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Crochet ဆိုလားဘဲ။
အဖျားဇာထိုးနည်း(crochet edgings)က ခေါင်းအုံးတို့ လက်ကိုင်ပုဝါအဖျားတို့မှာ ထိုးရင်လှမယ်ထင်တယ်။
ပန်းပွင့်အကြီးကြီးတွေထိုးရတာထက် အသေးက မြန်မြန်ပြီးတော့ ပိုပျော်တယ်။ ပြောမယ့်သာပြောတာ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်စတက်တုန်းကတည်းက ပန်းပွင့်အသေးတွေထိုးပြီး တပွင့်စီပြန်ဆက်ပြီး အမေ့အတွက် တဘက်ထိုးတာ ဘွဲ့ရပြီး အိမ်ထောင်သာကျသွားတယ် တဘက်က မပြီးသေးဘူး။ အမေ မြေးရရင်တောင် ပြီးပါ့ဦးမလားဘဲ။
Posted by မြရွက်ဝေ at 3:12 PM6comments
Posted by မြရွက်ဝေ at 12:15 PM3comments
アルファベット略語 (arufabatto ryakugo)
မနက်တိုင်းကြည့်ဖြစ်တဲ့ TBSရုပ်သံအစီအစဉ်ရဲ့ はなまるマーケット (hanamaru ma-ketto)မှာ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသူတွေကြား လတ်တလော ရေပန်းစားနေတဲ့ "Alphabet အတိုချုံ့စာလုံး"တွေအကြောင်း လွှင့်တာကြည့်လိုက်ရတယ်။ ကျောင်းသူတွေအချင်းချင်း ဖုန်းနဲ့mailပို့ရာက ခေတ်စားလာတာပါ။ အများအားဖြင့် ကိုယ့်အချင်းချင်းသာနားလည်နိုင်မယ့် လျှို့ဝှက်အတင်းပြောကြတာပါ။ တဖြေးဖြေးကျယ်ပြန့်လာပြီး တချို့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာပါ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
*KY - 空気　読めない (kuuki yomenai) = အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို နားမလည်ဘူး။
*JK - 女子　高生 (joshi kousei) = အထက်တန်းကျောင်းသူ။
*CB - 超 微妙 (chou bimyou) = ဝေခွဲရ၊ ဆုံးဖြတ်ရခက်တယ်။
*HK - 話変わるけど (hanashi kawarukedo ) = ဒါနဲ့ စကားမစပ်။
*KOK - 声の 音量 考えて (koe no onryou kangaete) = အသံကျယ်လွန်းတယ်။
*PK - パンツ 食い込んでる (pantsu kuikonderu) = ဘောင်းဘီ ကြပ်ထုပ်စီးလွန်းတယ်။
*PSI - パンツにシャツイン！ (pantsu ni shatsu in!) = ဘောင်းဘီထဲ ရှပ်အင်္ကျီထည့်ဝတ်!
*KO - これ おいしい！ (kore oishii!) = ဒါ အရသာရှိတယ်!
အပေါ်ကစကားလုံးတွေက အသုံးများပါတယ်။ အထူးသဖြင့် "KY"ကို ပိုသုံးကြတယ်။ အောက်ဘက်ကစကားလုံးတွေကတော့ ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ အတိုချုံ့စာလုံးတချို့ပါ။ ရမ်းသမ်းcookကျွန်မအတွက် အိမ်ကြီးရှင်ရဲ့စကားလုံးကတော့ "KO"ပေါ့။ (°∨°)
*AY - 頭 弱い (atama yowai) = ထုံအတယ်၊ ဉာဏ်ထိုင်းတယ်။
*MMK - モテてモテて困る (motetemotete komaru)= လိုက်ကြိုက်ကြလွန်းလို့ အခက်တွေ့တယ်။
*BA - ばばあ (babaa) = အဘွားကြီး။
*BU - ブス (busu) = ရုပ်ဆိုးကြီး။
*KI - キス (kisu) = ကစ်စ်။
*ZU - 図々しい奴 (zuuzuushii yatsu) = မျက်နှာပြောင်လွန်းသူ(အရှက်မရှိတဲ့ကောင်)။
Posted by မြရွက်ဝေ at 12:38 PM 1 comments
Dim Sum -点心 (tenshin / tenjin, တဲန်ရှင်း / တဲန်ဂျင်း) ထဲက တမျိုးဖြစ်တဲ့ "ရှူးမအိ" 焼売 (shuumai) လုပ်နည်းပါ။
ကြိတ်ပြီးသား ဝက်သား - 豚ひき肉 (butahikiniku) - 500ｇ
ကြက်သွန်နီ (+ကော်မှုန့်- ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်း) - 玉ねぎ（片栗粉 大さじ1）(tamanegi + katakuriko ) - ၁ ဥ
ဖက်ထုပ်အခွံ - シュウマイの皮 (shuumai no kawa) - ၃၀ချပ်
ဂျင်း (နုပ်နုပ်စဉ်း) - ◎しょうが（みじん切り) (shouga - mijinkiri) - ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ
ပဲငံပြာရည် - ◎しょうゆ (shouyu) - ထမင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်း
ဟင်းချက်အရက် - ◎酒 (sake) - ထမင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်း
နှမ်းဆီ - ◎ごま油 (goma abura) - ထမင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်း
သကြား - ◎砂糖 (satou) - လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
ကော်မှုန့် - ◎片栗粉 (katakuriko) - ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်း
ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း - ◎塩、こしょう (shio, koshou) - အနည်းငယ်
ဂေါ်ဖီထုပ် (သို့) မုန်ညင်းဖြူ စသဖြင့် - キャベツ、白菜など (kyabetsu, hakusai nado) - သင့်တော်သောပမာဏ
၁။ ကြက်သွန်နီကို နုပ်နုပ်စဉ်းပြီး ကော်မှုန့် ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းစာနှင့် ရောပါ။
၂။ ဇလုံထဲ ကြိတ်ပြီးသား ဝက်သားနဲ့ ◎က အဆာနဲ့ ဟင်းခတ်တွေကိုရောပြီး ခပ်စေးစေးဖြစ်တဲ့အထိနယ်ပါ။ ကြက်သွန်နီကိုပါ ထည့်ပြီး သမအောင်နယ်ပါ။
၃။ ဖက်ထုပ်အခွံကို လက်ညှိုးနဲ့လတ်မ ဝိုင်းထားတဲ့အပေါ်တင်ပြီး အဆာကို အလယ်မှာတင်ပါ။ ဇွန်းနဲ့အဆာကို ဖိချပြီး ပုံပေါ်လာအောင်လုပ်ပါ။
၄။ ပေါင်းအိုးထဲ ဂေါ်ဖီထုပ် (သို့) မုန်ညင်းဖြူကိုခင်းပြီး အပေါ်မှာ "ရှူးမအိ"တွေတင်ပြီး ၁၅မိနစ်ခန့်ပေါင်းပါ။ ပေါင်းအိုးမသုံးရင်လဲ ပုံမှန်ဟင်းချက်အိုးထဲ ရေထည့် ပန်းကန်နက်နက်နှစ်ဆင့်ထပ်ပြီး ပေါင်းနိုင်ပါတယ်။
Posted by မြရွက်ဝေ at 1:37 PM 1 comments
အများတကာ သွားရည်ကျစေဖို့ လက်စွမ်းပြထားတာတွေ တင်လိုက်တယ်။
တကယ်ဆို ကျွန်မက အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲသိပ်မကြိုက်ဘူး။ အိမ်ကြီးရှင် ကြိုက်လို့ ချက်ပေးတာ။ စားပြီး သူကဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်မက သွေးတိုးချင်သလို ခေါင်းမူးလာလို့ တရေးအိပ်လိုက်ရတယ်။
စားချင်တာတွေဘဲ ထည့်သုပ်ထားတဲ့ မစုံသုပ်ပေါ့။ သင်္ဘောသီးစိမ်း မရှိတော့ အစားထိုးအနေနဲ့ မုန်လာဥကို ခြစ်၊ ဆားရည်စိမ်၊ ရေဆေး ရေညှစ်လုပ်ပြီး ထည့်သုပ်ထားတယ်။ မဆိုးပါဘူး၊ သင်္ဘောသီးစိမ်း လို ချိုသားဘဲ။
နန်းကြီးဖတ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာရတဲ့ "အုဒွန်(うどん)"တွေကို ပြုတ်ထားတာ။ နန်းကြီးထက် ၂ဆခွဲလောက်ပိုကြီးတော့ နဲနဲစားပြီးများများ ဗိုက်ပြည့်တယ်။
ဒါက နေ့လည်ခင်း အဆာပြေလေး။
Posted by မြရွက်ဝေ at 3:39 PM2comments
Posted by မြရွက်ဝေ at 12:49 PM 1 comments
"မြောဂ"ကို စမြင်ဖူးတုန်းက ဘာအဖူးလေးတွေမှန်း မသိပါဘူး။ ဘယ်လိုချက်စားတာမှန်းလည်း မသိဘူး။ နောက်တော့ ဟင်းချက်နည်းအစီအစဉ်မှာ "မြောဂ"အကြောင်း ကြည့်လိုက်ရတယ်။ နဲနဲသဘောပေါက်သလိုရှိပေမယ့် သေချာတော့မသိပါဘူး။ မြန်မာပြည်က "ပဒတ်စာအပွင့်"နဲ့ တူတယ်လို့ မှတ်ထားလိုက်တယ်။ ခပ်မွှေးမွှေး "ပဒတ်စာအပွင့်"က ကင်မွန်းချဉ်ရွက်နဲ့ ဟင်းရည်ချက်ရင် အရမ်းလိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ "မြောဂ"ကိုလည်း ဟင်းရည်ချက်စားဖို့ စိတ်ထဲတေးထားလိုက်တယ်။
"မြောဂ"(みょうが)ကို (Myoga Ginger) Japanese Ginger bud လို့ခေါ်ပါတယ်။ အပင်က ငွေပန်းပင်အမျိုးအစားထဲကပါ။ မြေတွင်းဥကနေ အညှောက်ထွက် အပင်ပေါက်တာပါ။ "မြောဂ"ရဲ့ အနံ့ကလည်း ငွေပန်းနံ့နဲ့ဆင်တူပါတယ်။
စားဖို့ အနေတော် "မြောဂ"
- ခေါက်ဆွဲသုပ်ထဲထည့်ဖို့ ကြက်သားကို ဆား၊ ဂျင်း၊ ဆနွင်းနဲနဲစီ ထည့်ပြုတ်၊ (ကြက်သားပြုတ်ရည်ကို "မြောဂ"ဟင်းရည်ထဲထည့်ဖို့ချန်) အသားတုံးခပ်သေးသေးတွေဖြစ်အောင် လှီး၊ အနှစ်လုပ်ဖို့ ကြိတ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ ဂျင်းတွေကို ဆီသတ၊် အစိမ်းမှုန့်ထည့် ကြက်သားတုံးတွေထည့် ရေနဲနဲထည့်ပြီး အုပ်ထား၊ ဆီပြန်လာရင်ရပြီ။
- ဆိုင်က၀ယ်လာတဲ့ အဆင်သင့် ပြုတ်ပြီးဆီနဲ့လှိမ့်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲ (焼きそば- yakisoba)ကို microwave ovenနဲ့နွှေး၊ ကြက်သားအနှစ်တွေထည့်၊ ပဲအကျက်မှုန့်၊ မကျည်းရည်၊ ငံပြာရည်ထည့်နယ်၊ ခေါက်ဆွဲသုပ် ပြီး၏။
- ဟင်းရည်အတွက် ရေထဲ ကြက်သားပြုတ်ရည်၊ ဆား၊ ခနောဟင်းခတ်မှုန့်ထည့်တည်၊ ဆူလာရင် ပါးပါးလှီးထားတဲ့ "မြောဂ"ထည့်မွှေပြီးရင် ရပြီ။ (ရေနွေးပူကြောင့် ပန်းရောင်"မြောဂ"စိမ်းသွားတယ်။)
- နောက်တစ်နည်း- ရေထဲ ဆား၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်နဲ့ ခနောဟင်းခတ်မှုန့် (အချိုမှုန့်/ torigarasupu - 鶏がらスープ) ထည့်တည်၊ ဆူလာရင် "မြောဂ"ထည့်၊ ခဏမွှေပြီးရင် မီးပိတ်၊ ခပ်ရှိမ်းရှိမ်း မွှေးမွှေး "မြောဂ"ဟင်းရည် ရပြီ။
Posted by မြရွက်ဝေ at 6:01 PM 1 comments